Maxkamadaha caddaaladda Soomaaliland oo lagu eedeyey in ay hab musuqmaasuq ah adeegsadaan – Radio Daljir
Oktoobar 27, 2013 3:05 b 0
Hargaysa, October 27, 2013 – Wasaarada arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa ku baaqday in wax laga qabto musuqmaasuqa ka jira maxkmadaha caddaaladda ee deeganada Soomaaliland.
Wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkaas Maxamed Maxamuud Warancade, waxaa uu ?sheegay in ay jiraan dhalinyaro badan oo ay qabtaan laamaha amaanka iyagoo ku dhex jira falal lid ku ah amniga, isla markaasna isku dayaya xataa falal kufsi.
Mudane Warancade ayaa intaas kadib ku eedeyey maxkamadaha ay lacago musuqmaasuq ah ?oo ay ka qaataan qowsaska dhalinyarada loo xirxiro dembiyada isla markaasna sii daayaan, taas oo uu ku sifeeyey musuqmaasuq baahay oo u baahan in wax laga qabto.
?Maxkamadaha dalka kiisaska si caddaalad ah uma qaadaan, qaar ka mid ah dadka ay sii dayaan waa dhalinyaro ku eedeysan kufsi, lacago yar uun baa la siiyaa dabadeedna way sii daayaan.? Ayuu yiri wasiir warancade.
Magaalada Hargaysa ayaa habeenadii dambe waxaa ka socday howgalo amni-sugid ah oo ay bilaabeen ciidamada amaanka ee maamulka Soomaaliland, xili ay sii kordhayaan dhalinyaro falal dil, dhac iyo kufsi ah ka fuliya qaar ka mid ah xaafadaha magaalada.
Ilyaas Bare ?Aqoonsiga muwaadiniinta Kenya waa in la siiyaa caruurta qaxootiga ku dhashay Dhadaab?